ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဝရမ်းပြုတ်သွားတဲ့ ညီမလေးအတွက် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း – Cele Posts
ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဝရမ်းပြုတ်သွားတဲ့ ညီမလေးအတွက် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း
မအေးသောင်းလို့ အများက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အေးဝတ်ရည်သောင်း ကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေ ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ဇွန်လ(၂၉)ရက်နေ့ညမှာတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်တရားစွဲခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်(၂၄)ယောက်ကို အမှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဌာနတွေက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မအေးသောင်းကလည်း ပါဝင်လာပါတယ်..။
​အဆိုပါ သတင်းကြောင့် ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေ အပြင် ပြည်သူပရိသတ်တွေ ကပါ ဝမ်းသာနေကြပြီး ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်းအတွက် နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ကလည်း ဝမ်းသာနေရတဲ့အကြောင်း စာလေးရေးကာ ပြောပြလာပါတယ်..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..””Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုပြီး ညီမဖြစ်သူအတွက် အပျော်လေးတွေကို ရေးသားပြောပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ညီအစ်မသူံးယောက် ထဲက အငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ကလည်း အစ်မအတွက် ဝမ်းသာသလို အားလုံး အတွက်လည်း ဝမ်းသာနေရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြထားပါသေးတယ်..။သူမတို့ရဲ့ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း မအေးသောင်းနဲ့ အတူ အမှုပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခံရတဲ့ အခြားအနုပညာရှင်တွေ အတွက် ဝမ်းသာနေကြတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း မှတ်ချက်တွေ ပေးထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ပုဒျမ ၅၀၅(က) ဝရမျးပွုတျသှားတဲ့ ညီမလေးအတှကျ ဝမျးသာပြျောရှငျနကွေောငျး ပွောပွလာတဲ့ နှငျးဝတျရညျသောငျး
မအေးသောငျးလို့ အမြားက ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော အေးဝတျရညျသောငျး ကတော့ တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီးမှာ ပွညျသူတှေ ဘကျက ရပျတညျခဲ့တာကွောငျ့ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူခွငျးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ..။ဇှနျလ(၂၉)ရကျနညေ့မှာတော့ ပုဒျမ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့တရားစှဲခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျ(၂၄)ယောကျကို အမှုပွနျလညျရုတျသိမျးပေးလိုကျတဲ့အကွောငျး စဈကောငျစီရဲ့သတငျးဌာနတှကေ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပွီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မအေးသောငျးကလညျး ပါဝငျလာပါတယျ..။
​အဆိုပါ သတငျးကွောငျ့ ကာယကံရှငျမိသားစုဝငျတှေ အပွငျ ပွညျသူပရိသတျတှေ ကပါ ဝမျးသာနကွေပွီး ညီမဖွဈသူ မအေးသောငျးအတှကျ နှငျးဝတျရညျသောငျး ကလညျး ဝမျးသာနရေတဲ့အကွောငျး စာလေးရေးကာ ပွောပွလာပါတယျ..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su ma 😍😘🌷💐..””Su maaaaaaa . Ma g is so happy 😘😍..” ဆိုပွီး ညီမဖွဈသူအတှကျ အပြျောလေးတှကေို ရေးသားပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
ညီအဈမသူံးယောကျ ထဲက အငယျဆုံးလေးဖွဈတဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျး ကလညျး အဈမအတှကျ ဝမျးသာသလို အားလုံး အတှကျလညျး ဝမျးသာနရေတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွထားပါသေးတယျ..။သူမတို့ရဲ့ပို့ဈအောကျမှာတော့ ပရိသတျတှကေလညျး မအေးသောငျးနဲ့ အတူ အမှုပွနျလညျ ရုတျသိမျးခံရတဲ့ အခွားအနုပညာရှငျတှေ အတှကျ ဝမျးသာနကွေတဲ့ အကွောငျးတှကေိုလညျး မှတျခကျြတှေ ပေးထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
ဒီနေ့မှာပဲ ဂျိုကာရဲ့ချစ်သူလေးနဲ့အတူ မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်များ